HIM | Health in Myanmar » 2013 » December
An idea on stigma and discrimination
An anonymous comment … Jamie ++++++++++++++++++ In the new year, how about we try genuinely promoting human rights, rather than just paying lip service? Of course, this would require that we are concerned about sex workers, drug users and men who have sex with men for their own sakes, rather than just because they might […]
Action outcome from ICAAP?
Did Myanmar participants at the ICAAP come away with any new ideas on reducing stigma and discrimination? Jamie ++++++++++++++++++ Stigma Against HIV on Agenda as Burma Joins Regional Conference Samantha Michaels The Irrawaddy 18 November 2013 RANGOON — Government health officials from Burma will travel to Thailand this week foramajor regional conference focused […]
လိင်ဖျော်ဖြေသူ အမျိုးသမီးများက အခက်အခဲများကို ပြန်ပြောရန် စိုးရွံ့ခြင်းကြောင့် ယင်းတို့၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်မပေးနိုင်ဖြစ်နေ
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, HIV, SW, အခွင့်အရေး
အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီကာကွယ် တားဆီးရေး လုပ်ငန်းများနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး အတွင်းရှိ ပြင်ဦးလွင်၊ မလှိုင်၊ ကျောက်ပန်းတောင်း၊ မိတ္ထီလာ၊ စစ်ကိုင်း စသည့်ဒေသ များတွင် ကျေးလက်ဒေသများ တိုင်အောင် ဆောင်ရွက် ပေးလျက် ရှိသည်။
Changing the course of history through leadership
Here we haveastomach-turning rewriting of history, in whichasingle speech by Mandela is credited with changing the course of history. It was not that specialaspeech: http://www.iasociety.org/Web/WebContent/File/Nelson_Mandela_speech_Durban_2000.pdf And Suu Kyi is not that kind of leader. The author spells Daw incorrectly in the last paragraph. When Burmese people write about Elton […]
A heartfelt thank you to everyone of his readers who commented on postings this year. Some recent anonymous comments received by the moderator regarding HIV Information for Myanmar [him] postings are here: On Prasada Rao’s comments on getting to zero: “Whatever Prasada Rao says,we need to prove that he can be wrong, so let us […]
နယ်စပ်ဒေသတစ်လျှောက် HIV/AIDS စီမံချက်များ ဆောင်ရွက်မည်
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, ART, HIV, UNAIDS
ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အားနည်းသော နယ်စပ်ဒေသများ အတွက် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) ၏ အကူအညီဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ နယ်စပ်မြို့ ငါးမြို့တွင် HIV/AIDS ကာကွယ်ရေးနှင့် ကုသရေး လုပ်ငန်းများကို လာမည့် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စတင်ဆောင် ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း National AIDS Program ၏ စီမံချက် မန်နေဂျာ ဒေါက်တာမြင့်ရွှေက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
A second case for investment
This case for investment is even longer than the one reviewed yesterday. One wonders why there are two. Page9– “A mid-term review of the NSP II implementation will take place in January 2014.” Hasalist of the team members been made public? Page 10 – The sister document reviewed yesterday stated: “Myanmar […]
AIDS ဆိုတာဘာလဲ (၉)
Author: HimBur | Category: Myanmar, လူတိုင်းအတွက်no comments | Tags: AIDS, HIV, ဒေါက်တာမြင့်မြင့်ခင်
အရင်က လူတွေမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် လူကီးမီးယား ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အတိအလင်း မပြောနိုင်ခဲ့ကြဘူး။ Robert Gallo ကြောင့်သာ အသေအချာ သိရတော့တာ။ ၁၉၈၁-၈၂ နောက်ပိုင်းမှာတော့ AIDS ရောဂါရဲ့ အသွင်သဏ္ဍန်ဟာ ပိုပြီး ပီပြင်လာပြီ ဖြစ်တယ်။ AIDS ရောဂါပိုးဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ပဲ ဖြစ်မယ်၊ ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုရင်လည်း ဖြစ်လောက်တာက Robert Gallo တွေ့ထားတဲ့ reto-virus အမျိုးအစားပဲလို့ ယူဆပြီး ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာတော့ Dr. Robert Gallo ရဲ့ N.I.C ဌာနက သုတေသန လုပ်ပြီး စေ့စေ့ပေါက်ပေါက် ရှာဖွေစမ်းသပ်ကြ တော့တာပဲ။
Case for investment?
To whom is this first ‘case for investment document’ directed? One hopes they read it critically. The [him] moderator would be happy to get comments or replies to his analysis below from any of the stakeholders who were consulted on the contents: “Alliance, East-West Center, Médecins Du Monde, Ministry of Health, MSF-Holland, Myanmar Positive Group, […]
The Asian Development Bank is not transparent
Here is an example of lack of transparency on the part ofamajor donor. The Asian Development Bank is giving ten million dollars to the HIV response in Myanmar and it is impossible to figure out how the money is going to be spent. There are two Eleven Myanmar articles below. Since both of […]
ADB ၏ ကန်ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းတန် HIV/AIDS စီမံချက် ကျေးရွာ ၇၀၀ ကျော်တွင် စတင်မည်
Author: HimBur | Category: Myanmar, Newsno comments | Tags: AIDS, HIV, ရန်ပုံငွေ, အကူအညီ
မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရနှင့် HIV/AIDS ကုသရေး၊ ကာကွယ်ရေး စီမံချက်များ ဆောင်ရွက်နေသော ပြည်တွင်း ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများ ကြားပေါင်း ကူးပေးရန် ပြည်နယ်သုံးခုကို ကျေးရွာပေါင်း ၇၃၉ ခုတွင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ဆယ်သန်း သုံးစွဲကူညီပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း အာရှ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) က ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်သည်။